Isbitaalka Guud ee Ciidanka Xoreynta Dadka - Shenzhen Doneax Science and Technology CO., LTD
Isbitaalka Guud ee Ciidanka Xoreynta Dadka
Isbitaalka Guud ee Ciidanka Xoreynta Dadweynaha (PLAGH) waxaa la aasaasay sanadkii 1953, wuxuu iskiis u horumariyay isbitaal guud oo weyn oo casri ah oo leh karti-xirfadeedyo fara badan, dhammaan qeybaha kala duwan ee bukaan-socodka, qalab casri ah iyo awood gaar ah, gaar ahaan hoosta ciidamada wadajirka ah ee taakuleynta saadka ee Ciidanka Xoreynta Dadka Shiinaha. Isbitaalku waa xarun caafimaad oo muhiim u ah shaqaalaha ka socda dowladda dhexe. Waxay mas'uul ka tahay daryeelka caafimaad ee guddiyada milatariga, xarunta dhexe iyo qeybaha kale, daryeelka caafimaadka ee saraakiisha iyo askarta, bixinta wareejinta daaweynta caafimaad ee adeegyada milateri ee kaladuwan, baaritaanka iyo daaweynta cudurada aan laga bogsan karin. Isbitaalku sidoo kale waa dugsi caafimaad oo ka tirsan Ciidanka Xoreynta Dadka. Mawduucyadeeda waxbariddu badanaa waa waxbarasho jaamacadeed. Waa qeybta kaliya ee wax lagu baro ee uu maamulo isbitaalka guud ahaan ciidanka.
Sida ku cad macluumaadka bogga rasmiga ah ee isbitaalka bishii Diseembar 2015, isbitaalka, waxaa hadda ka jira 165 waaxyo farsamo iyo caafimaad, 233 unugyo kalkaaliyaal caafimaad ah, 8 waaxyo qaran oo muhiim ah, 1 shaybaar qaran oo muhiim ah, 20 heer gobol iyo heer wasiir iyo heerka shaybaarada muhiimka ah ee militariga, 33 xarumo caafimaad oo takhasus gaar ah u leh militariga iyo machadyada cilmi baarista, sameynta 13 faa iidooyin xirfadeed oo lagu garto ogaanshaha iyo daaweynta dhameystiran Isla mar ahaantaana, waa xarunta bandhigga daryeelka degdegga ah ee ciidanka oo dhan iyo xarunta tababarka ee Ururka Kalkaaliyeyaasha Shiinaha. Waxaa jira xarumo caafimaad oo caalami ah iyo xarumo caafimaad oo caafimaad, oo bixiya adeegyo daryeel caafimaad oo heer sare ah oo ka hortag ah. Sannad kasta, in ka badan 4.9 milyan oo bukaan ah oo u baahan daaweyn degdeg ah ayaa iman doona waaxda bukaan-socodka ee isbitaalka. Ka sokow, waxay qaabishaa 198,000 qof sannad kasta, ku dhowaad 90,000 oo hawlgalna waa la sameeyaa.
Isbitaalku wuxuu leeyahay 5 aqoonyahan oo ka tirsan Akadeemiyadda Shiinaha ee Injineerinka, in ka badan 100 khubaro farsamo oo ka sarreeya heerka 3, iyo in ka badan 1,000 xirfadlayaal iyo farsamo-yaqaanno qaata Tacliinta Sare ee Xirfadaha. Isbitaalku wuxuu si isdaba joog ah ugu guuleystey in kabadan 1,300 abaalmarino guulo cilmiyeed iyo farsamo oo ah ama ka sareeya heerka gobolka iyo heer wasiir, oo ay kujiraan 7 abaalmarino ugu horeysa ee horumarka sayniska iyo tikniyoolajiyadda qaranka, 20 abaalmarino labaad, 2 abaalmarino qaran oo hal abuur ah, iyo 21 abaalmarino koowaad ee milatari iyo horumarka farsamada.
Waaxda ugu weyn
Sida laga soo xigtay macluumaadka ku yaal bogga rasmiga ah ee isbitaalka bishii Diseembar 2015, isbitaalku wuxuu leeyahay 165 waaxyo teknoolojiyadeed iyo caafimaad iyo 233 unugyo kalkaaliso caafimaad ah. Waxaa jira xarumo caafimaad oo caalami ah iyo xarumo caafimaad oo caafimaad si ay u bixiyaan adeegyo ka hortag ah iyo daryeel caafimaad oo heer sare ah.
Sida laga soo xigtay macluumaadka ku yaal bogga rasmiga ah ee isbitaalka bishii Diseembar 2015: Isbitaalka dhexdiisa, waxaa ku yaal 1 shaybaar muhiim ah oo qaran, 2 shaybaarada muhiimka ah ee Wasaaradda Waxbarashada, 9 shaybaarada muhiimka ah ee Beijing, 12 shaybaarada muhiimka ah ee daawada milatariga, 1 qaran xarun cilmi baaris daawo, iyo 1 xarun cilmi baaris wadajir ah, sameynta 13 faa iidooyin xirfadeed oo ka kooban baaris dhameystiran iyo daaweyn.
Sida ku cad macluumaadka bogga rasmiga ah ee isbitaalka bishii Diseembar 2015: Isbitaalka wuxuu kafaala qaaday 23 joornaal oo muhiim ah oo ku saabsan sayniska iyo teknolojiyadda Shiinaha, hal joornaalna waxaa ku soo daray SCI.